सीएनसी एकल स्पिन्डलग्यालेक्सी एकल नियन्त्रण Hank गर्न कोन कपास नायलन घुमावदार मिसिन - चीन सीएनसी एकल स्पिन्डलग्यालेक्सी एकल नियन्त्रण Hank गर्न कोन कपास नायलन घुमावदार मिसिन प्रदायक,कारखाना -FEIHU
Hank गर्न कोन रोलर संग घुमावदार मिसिन
एक मोटर Hank गर्न कोन रोलर संग घुमावदार मिसिन
24(6 spindles / समूह), 48, 96 (वैकल्पिक)
एकल पक्ष वा डबल पक्ष
220वी हो 50hz एकल चरण (वैकल्पिक)
120W / धुरी
500-600m / मिनेट(गति समायोज्य)
अधिकतम. यार्न व्यास
समतल bobbin Φ 80mm×220मिमी
वा कोन Φ 80मिमी×220मिमी घटना 3.5°
एल 1454 एक्स डब्ल्यू 690 एक्स एच 1700 मिमी (4 spindles)
205किलो / समूह
एक: हाम्रो लक्ष्य राम्रो छ,राम्रो, सबै भन्दा राम्रो, कहिल्यै आराम गरौं. & हाम्रो सेवा उद्देश्य ग्राहकहरु सन्तुष्ट बनाउन हाम्रो सबै भन्दा राम्रो प्रयास हो. व्यावसायिक टोलीले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियामा समयमा भेट कुनै पनि समस्या समाधान हुनेछ.
एक: पैकिंग वा तपाईंको अनुरोध अनुसार Seaworthy निर्यात प्लाईवुड अवस्थामा.
अघिल्लो : डबल साइड Hank गर्न कोन घुमावदार मिसिन
अर्को : बिजुली फीड Hank गर्न कोन रासायनिक फाइबर सिल्क यार्न घुमावदार मिसिन